06/07/2018 - Page 3 sur 3 -
Fanabeazana : Voatazona ny datin’ny fanadinam-panjakana
“Momba ny fanadinam-panjakana, hamafisiko indray, tsy misy manan-kevitra ny hampihemotra ny daty ny ato amin’ny minisitera. Hotanterahina amin’ny 14 aogositra ho avy izao ny CEPE ary efa manomboka ny “quarantaine” amin’ny “impression” ny laza adina …Tohiny
Vehivavy namono ny vadiny : Nadoboka eny Antanimora
Taorian’ny nanolorana ny raharaha teo anatrehan’ny fampanoavana io omaly io, dia nadoboka am-ponja vonjimaika eny Antanimora avy hatrany ilay vehivavy 46 taona antsoina hoe Rasolonjatovo Sabine, ahiana ho namono ny vadiny teny Ivandry ny alin’ny …Tohiny
Andiany faha-4 : Raikitra ny fifidianana izay vehivavy malagasy ngeza nefa tsara
Matetika dia ny vehivavy manifinify no hifantohan’ny fifidianana izay ho vehivavy tsara bika aman’endrika. Maro anefa ary ao anatin’izany ny vehivavy malagasy no manam-batana nefa manana ny hatsarany. Raikitra ary miditra amin’ny andiany faha-4 ny …Tohiny
« Tsy vahaolana »
Marina ary tsy misy diso mihitsy ny fanambarana nataon’ireo mpanao politika maro naneho hevitra taorian’ny fanovana governemanta farany teo, fa tsy mahavaha olana akory ireo minisitra Mapar ireo na omena seza aza. Porofon’izany ny mbola …Tohiny
Feno fito taona katroka izao ny Maputo III, nandinihana ny Tondrozotra nivoahan’i Madagasikara tamin’iny krizy 2009 niarahan’ireo ankolafy efatra avy amin’i Andry Rajoelina, Didier Ratsiraka, Zafy Albert ary Marc Ravalomanana. Tsy nanatrika ity Maputo III ...Tohiny